Izixhobo zokufumana kunye nokuPhakamisa iiNgxelo kunye neeNtatheli
Izisombululo ze-Agility PR -Isuti yeemveliso kunye neenkonzo zithembekile ziiarhente ze-PR kunye nemibutho kwihlabathi liphela.
Ukuluma PR -Senza ukuba kube lula kumashishini amancinci ukufumana kunye nokuphendula kumathuba amahle eendaba.
Gorkana -Obona buchwephesha buchanekileyo kwaye buchanekile e-UK.
Nceda iNtatheli -Ukusuka kwi-New York Times, ukuya kwi-ABC News, ukuya kwiHuffingtonPost.com kunye nawo wonke umntu ophakathi, phantse ama-30,000 amalungu eendaba acaphule. HARO kwimithombo yamabali abo. Wonke umntu yingcali kwinto ethile. Ukwabelana ngobuchwephesha bakho kungakunika ithuba elikhulu leendaba obukade ulikhangela.
Intatheli -Fumana intatheli kwaye ubone ukuba babhala ngantoni.
I-Kitty yeMidiya yinkonzo ehlawulwayo ($ 89.95 ngenyanga) yeengcali zeshishini ukunxibelelana kunye nokuhlala unxibelelana neentatheli ngokuthumela ngokukhawuleza nangokulula. Iintatheli ze-9,704 kunye ne-PR zisebenza ukusukela ngo-2001.
MediaOnTwitter -Uphuhliso lokudibana nabasasazi, ababhali kunye nabanye abantu beendaba ngeTwitter. Landela bona kunye nabo ukuya kuthi ga ngoku malunga nokuhlaziywa kokugqitywa kwenkampani. Iiasethi ezimbini ezinengxelo enkulu kubantu beendaba kwiTwitter Media kwiTwitter.
The Cinezela iMeltwater isoftware yobudlelwane nemidiya-njengenkonzo ikunceda ukuba wakhe uluhlu lwezinto ezijolise ngakumbi, usebenzisa inqaku losasazo lweentatheli olusekwe kwinqaku. Fumana iintatheli ezilingana nebali lakho ngokusekwe kwizinto abazibhalileyo kwixa elidlulileyo, emva koko usasaze umyalezo wakho nge-imeyile okanye ngocingo kwiqonga elinye. Ukubhengezwa: I-Meltwater ngumxhasi we Martech Zone
Imack Rack (Inkonzo ehlawulelweyo eqala kwi- $ 199 ngenyanga) ikhokelela kumbutho wokuphelisa ugaxekile we-PR ngokubeka iintatheli kulawulo lwebhokisi engenayo. KwiMack Rack kulula ukufumana intatheli elungileyo, jonga izinto abazenzayo kwaye ungazifihli, kwaye ubathumele iipaki abafuna ukuzibona.
Iindaba eziqinisekisiweyo inikezela ngeendaba zosasazo lwehlabathi ngesiseko sedatha esinokukhangelwa, iingcali ezilungele udliwanondlebe kunye nemibono yamabali efikelelekayo 24/7.
Amanqaku okuPakisha Yenzelwe ukunika i-PR ithuba lokuphonononga kunye nokuthetha ngamava abo kunye neentatheli ezithile.
UProfNet -Ukhangela ukubekwa kwimithombo yeendaba? Iintatheli kunye neebhlogi zithumela amawaka amabali akhokelela inyanga nenyanga kubasebenzisi beProfNet. Ngaba amajelo eendaba eze kuwe ngeProfNet.
Unxibelelwano lweNtatheli yenye endisandula ukujoyina, kodwa ndiyayithanda ifomathi yee-imeyile kunye nenkqubo yazo yokuphendula- phambili kakhulu kuneHARO.
Impendulo Indawo yogcino-nkcukacha yeendaba yase-UK-Khangela kwaye uchonge abafowunelwa abafanelekileyo kunye namathuba e-PR.
Imvelaphi yeebhotile -Sinceda iintatheli kunye neebhlogi ukufumana imithombo. Sinceda amashishini kunye ne-PR pros ukuba zifumaneke mahala.
tags: agile przikhawulezeUkuluma prIntatheli ye-bulldogfumana iintathelifumana iintatheligorkanaharoncedisa intatheliIndawouluhlu lweentatheliintatheliImidiya kwi-twitterImithombo yeendabakwiyogekoUmatshini wokushicilela we-meltwaterindawoziqinisekisiwe iindabaukumaamanqaku abekiweyoNewswireiprofnetuqhagamshelo lwentatheliuluhlu lwentatheliNtathelikhangela iibhlogikhangela iintathelikhangela iintatheliImvelaphi yebhotileumthombo
Agasti 14, 2015 kwi-8: 50 AM
Enkosi ngoluhlu lwezixhobo, Karr! Ngaba uyazi naziphi na iinkonzo kwamanye amazwe? Umzekelo, eRashiya ithandwa kakhulu pressfeed.ru. Yintoni eyaziwa kakhulu e-UK?